राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीको जवाफ ‘बजेट वायुपङ्खी घोडा पनि हैन, कछुवा पनि छैन’ – सुदुरन्युज डट कम - SudurNewsNP – ताजा समाचार, सूचना अथवा भिडियो हरु
काठमाडौँ, जेठ १९ गते ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मुलुकको आवश्यकता र सरकारको लक्ष्य अनुसारको भएको बताउनुभएको छ । वार्षिक बजेटमा राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीयताको मर्म अनुसार नै भएको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्ने सांसदको आरोप खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले पहिलो पटक बजेटमा उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षण दिइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्पनी मोडलमा लैजानु, नाफाको लगानीमा कर मिनाहा गर्नुले लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गनुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्रबिना समावेशी अर्थतन्त्र हुन नसक्ने सांसदको भनाइमा प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो ‘राज्यको भूमिका नभई कसरी समावेशिता हुन्छ ? राज्यको भूमिका नै नभए निजी क्षेत्रले मात्र कसरी समावेशिता बनाइदिन्छ ? यस्तो ज्ञान मलाई पनि चाहियो । अर्थमन्त्रीको इच्छाले निजी क्षेत्र खुम्चन सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाले पनि दिँदैन ।’
जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजिक सुरक्षा २०५१ मा मनमोहन अधिकारीले ल्याउँदाको एउटा डिजाइनर म पनि हुँ । यहाँ उपस्थित केही माननीयलाई पनि यो विषय जानकारी छ । हाम्रो कार्यक्रम हो यसलाई छाडिन्न । चिन्ता नगर्नुस् ।
सामाजिक सुरक्षाका दायरा फेरिएका छन् । यही हेरेर स्वास्थ्य बीमालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ । नगर्दै दिने कुरामा पर्खनुस् । हेर्दै जानुस्, स्वामित्व र जिम्मेवारी लिन्छौँ । यसमा धेरै चिन्ता नलिनुस् ।’
नेकपाकै दीननाथ शर्माले बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक रहेको बताउनुभयो । शर्माले थोरैमात्र नयाँ कार्यक्रम भए पनि विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई बजेटले जोड दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनु सकारात्मक नै भएको बताउनुभयो । रोजगारी सिर्जना, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था सकरात्मक रहेको शर्माले बताउनुभयो ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अन वार्ताका लागि मस्को जाने
सात प्रदेशमा पुग्यो ४ अर्ब ३४ करोड –...